Soo dejisan eScan Anti-Virus 14.0.1400.2228 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: eScan Anti-Virus
eScan Anti-Virus – software ah oo ay soo saareen shirkadda antivirus MicroWorld Technologies si looga hortago khataraha hadda jira iyo degdega ah. Antivirus wuxuu u qaybsan yahay qaybo kala duwan oo amniga ah wuxuuna isticmaalaa nidaam midab-codeyn ah si uu u muujiyo dhibaatooyinka amniga amaba ka bacdi, maqnaanshaha hanjabaadaha. eScan Anti-Virus wuxuu ilaaliyaa faylasha iyo faylasha ka dhanka ah weerarrada fayraska iyo isbeddelada aan la fasixin, wuxuuna ka tirtiraa faylasha cudurka qaba iyo walxaha khatarta ah ama wuxuu ku dhajiyaa karantiilaha. eScan Anti-Virus waxay taageertaa tiknoolajiyada badbaadada daruuriga ah si ay u aqoonsadaan hanjabaado cusub iyo kuwo aan la aqoon. Dab-damis labada-lugood ah ayaa kormeeraya taraafikada soo socota iyo kuwa socda, iyo shaandhada dheeraadka ah ee isdhexgalka ayaa ogaan kara xayawaanka isku daya inuu galo shabakadda. eScan Anti-Virus waxaa ku jira antivirus e-mail kaas oo eegaya farriimaha soo socda ee ku xirnaanta xaasidnimada iyo xayeysiinta spam ee la dhisay si loo yareeyo emails aan loo baahnayn oo ah spam.
Ka ilaalinta ka ilaalinta weerarrada fayraska
Qalabka khatarta ah ee la ogaado
Dab-damis labada-dhinac ah
Aqoonsiga hanjabaad cusub iyo mid aan la aqoon
Tijaabi email soo socda
Soo dejisan eScan Anti-Virus
Faallo ku saabsan eScan Anti-Virus
eScan Anti-Virus Xirfadaha la xiriira